မန္တလေးမြို့၌ ဆီထွက်သီးနှံနှင့် စားသုံးဆီကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်း? - Yangon Media Group
မန္တလေးမြို့၌ ဆီထွက်သီးနှံနှင့် စားသုံးဆီကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်း?
မန္တလေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂
ဆီနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မူဝါဒအကြမ်း ရေးဆွဲရာတွင် သက်ဆိုင်သူများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အားလုံးပါဝင်စေပြီး အကြမ်းထုတ် ပြီးချိန်ထိ မပါဝင်ပါက မပြည့်စုံ ဟုယူဆကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆီ ကုန်သည်နှင့် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ကြူက ဖေ ဖော်ဝါရီ ၂ရက် နံနက်ပိုင်းက မန္တလေးကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာတွင် ကျင်းပသည့် ဆီထွက်သီးနှံနှင့် စားသုံးဆီကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြေကြားခဲ့သည်။
”ဆီနှင့် ဆီထွက်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့သက် ဆိုင်တဲ့ မူဝါဒရေးဆွဲဖို့ဆိုတာ မ လုံလောက်ဘူး။ ပဲ၊ နှမ်းစိုက်ပျိုးတဲ့ တောင်သူတွေကို ဦးစားပေးရ မယ်။ ဆီစက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ဦးစားပေးရမယ်။ ကျန်းမာရေးအ တွက်ဦးစားပေးရမယ်။ ဒီတော့ ကျန်းမာရေးအဆင့်၊ စိုက်ပျိုးထုတ် လုပ်တဲ့တောင်သူတွေအဆင့်၊ ရောင်း ချတဲ့အဆင့်၊ ထုတ်လုပ်တဲ့အဆင့်၊ အသင်းအဖွဲ့၊ စီမံကိန်း၊ အခွန်စတဲ့ ဝန်ကြီးဌာနတွေအကုန်လုံး ဘယ်လို စဉ်းစားမလဲ။ တင်သွင်းလာတဲ့အ ရာတွေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဒါတွေ အကုန်ပါရမယ်။ အခုတော့ဒါတွေ မပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်တွေပါတဲ့ စာရွက်တွေက နောက်မှသိရတယ်။ နောက်ပိုင်း အခုလိုအစီအစဉ် တွေလုပ်မယ်ဆိုရင် ကဏ္ဍတစ်ခု လုံးမှာပါတဲ့သူတွေ အကုန်လုံးဖိတ် စေချင်တယ်။ အကြမ်းထုတ်တယ် ဆိုတာကလည်း အရေးကြီးတယ်။ အကြမ်းထုတ်ပြီးမှ လွှတ်တော်ကို တင်ရမယ်။ အကြမ်းထုတ်တဲ့ အချိန် ဌာနပေါင်းစုံမပါဘူးဆိုရင် မပြည့်စုံဘူးလို့ယူဆတယ်” ဟု မြန် မာနိုင်ငံဆီကုန်သည်နှင့် ဆီလုပ် ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့် ကြူက ပြောကြားသည်။
အမျိုးသား ပို့ကုန်မဟာဗျု ဟာကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ ရာ ယင်းမဟာဗျူဟာတွင် ကဏ္ဍပေါင်း ၁၁ခုပါဝင်သည့်အနက် ဒုတိယ ဦးစားပေးကဏ္ဍဖြစ်သည့် ပဲမျိုးစုံနှင့်ဆီထွက်သီးနှံကို ဆောင် ရွက်ရာ၌ စားသုံးဆီနှင့်ဆီထွက် သီးနှံကဏ္ဍ၊ ပို့ကုန်နှင့်သွင်းကုန် ပိုင်းတွင် စားဆီသည် အရေးကြီး သည့်အတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။ ”ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကအား ဖြင့် စာတမ်း ၁၄စောင်ကို စာတမ်း ရှင်တွေကတင်သွင်းမယ်။ အပိုင်း သုံးပိုင်းတော့ ခွဲခြားထားတယ်။ မျိုးစေ့ကနေစပြီး ဆီဖြစ်တဲ့အထိ ဘယ်လိုကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်မလဲ။ ဘယ် လိုရောင်းဝယ်မလဲအထိ ပါတယ်။ စာတမ်းရှင်ငါးယောက်ကနေ ဆွေး နွေးမယ်။ ပြီးရင်စကားဝိုင်းပွဲတွေဆွေးနွေးပြီး ဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လို အခြေခံမူတွေ၊ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ဘယ်လို ချမှတ်မလဲဆိုတာတွေ လုပ်မယ်။ ပြီးရင်မူဝါဒရေးဆွဲမယ်”ဟု စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးသူက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဆီစား သုံးမှုနှင့် သုံးစွဲမှုမှာ တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန် တစ်သန်းခန့်ရှိပြီး ပြည် တွင်းထုတ်လုပ်မှုမှာ တန်ချိန်လေး သိန်းခန့်ရှိသဖြင့် နှစ်စဉ်ပြည်ပမှ စားအုန်းဆီ၊ နေကြာဆီ၊ ပဲပုပ်ဆီ တန်ချိန် ခြောက်သိန်းနီးပါး တင်သွင်းနေရသည့်အတွက် ဆီလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းအနေ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆီနှင့်ပတ် သက်သော အချက်အလက်များ၊ ဆီထွက်သီးနှံ စိုက်ပျိုးသောအ ချက်အလက်များနှင့် စီးပွားရေး တွက်ခြေကိုက်မှုများကို တင်ပြခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
အော်စကာ ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ နံပါတ်တစ်ရောက်နေတဲ့ Black Panther
အနိုင်ကျင့်မှု ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်ရေး ဗီဒီယိုတစ်ခုကို လေဒီဂါဂါ လွှင့်တင်
မြောက်ကိုရီးယားအား အရေးယူမှုဖြင့် ဖိအားပေးရန် အမေရိကန်က ကုလသမဂ္ဂကို အကူအညီတောင်း